डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर : अक्सिजनको मात्रा र रक्तचाप घट्याे, एन्टिबायोटिक दिइँदै - ५ माघ २०७५, NepalTimes
डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर : अक्सिजनको मात्रा र रक्तचाप घट्याे, एन्टिबायोटिक दिइँदै
काठमाडौं : विगतमा भएको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन माग राखेर १० दिनदेखि अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले केसीको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ।
इलाममा अनशन बसेका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि बिहीबार राति हेलिकोप्टरमा ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गएिको छ।
केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्कले भने, ‘स्वास्थ्य गम्भीर रहेको उपचारमा संलग्न मेडिकल टोलीले जानकारी गराएको छ।’ खड्काका अनुसार केसीको रगतमा ग्लुकोज र फोस्फोरसको मात्रा कम भइसकेको छ। उनको फोक्सोमा पनि संक्रमण भएकाले एन्टिबायोटिक औषधि चलाइएको छ ।
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा र रक्तचाप पनि घटेको छ। केसीलाई मेडिकल चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको निर्देशक खड्काले बताए। केसीको शुक्रबारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराइएको बुलेटिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आइसियू कक्षबाहिर पनि टाँसेको छ।, आजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।